युगसम्बाद साप्ताहिक - आजको दिशाहीन राजनीतिक चरित्र - महेश्वर शर्मा
Monday, 04.06.2020, 03:42pm (GMT+5.5) Home Contact
Monday, 03.23.2020, 09:03am (GMT+5.5)
साम्राज्यवादीको चकचकी भएको बेलामा पनि आफ्नो पृथक र स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाएर बसेको नेपाल आज नेपालीहरुकै अविवेकले गर्दा शंकटापन्न अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने जगजगी भएको छ । यसको कारण के भने आज राजनीतिक दलहरु सिद्धान्त र आस्थाका आधारमा नभएर जातित्व र प्रान्तका आधारमा विभाजित हुने मानसिकतामा पुगेर पार्टी नै खोलेको पनि देखिएकै हो । यसको अर्थ दलहरुको आधार नै खलबलिएको सिथति बुझ्न सकिन्छ । प्रान्त छुट्याउने र एकल पहिचानन खोज्ने नारा पनि सुनिएकै हुन् ।
यो विभाजनकारी अभियान माओवादीले राष्ट्रको एकता नै चुँडिने गरी आँखा चिम्लेर जसले जे माग्छ त्यही दिन्छौं भनेर उत्ताउलो व्यवहार देखाउन थालेपछि आउन थालेको हो र यसमा कतिपय बुद्धिजीवी समेत विचलित हुन पुग्दा प्रजातन्त्र नै कतै ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ हुने त होइन भनेजस्तो सोचनीय स्थिति आउनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना नै सम्झनु पर्दछ । मिलेर बसेका सबै जातजातिले आआफ्नै डम्फू बजाउन थाल्ने हो भने देश सग्लो रहला ? विचारणीय प्रश्न हो यो ।
२०६२ सालको आन्दोलनले नयाँ आशाको बीउ रोपेको थियो, तर विस्तारै त्यो बीउ त भाले बीउको रुपमा देखिन थालेपछि अर्थात् सत्ताधारी नै चरम भ्रष्ट भएको देखेर जनता निराश हुँदै गएका छन् । राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रमा मनपरी गर्न पाएपछि सामाजिक जीवनमै विचलन आएको छ । मन्त्री नै भ्रष्टाचारका आहालमा चुर्लुम्म भएको देखेको युवापुस्ताले कस्तो शिक्षा ग्रहण गर्ला सोचनीय स्थिति छ ।
आजको अराजक स्थिति, मनपरीतन्त्र, अनुशासनहीनता, चारित्रिक अधःपतन पराकाष्टामा देखिनु र सरकारमा हुनेहरु नै त्यसैमा संलग्न देखिनुबाट परिवर्तनकै औचित्य समाप्त भएको छ । जनता पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने शुद्धि नै सरकार चलाउनेहरुमा आएको देखिएन । अधिकार पाएपछि मान्छे कसरी बिग्रदोरहेछ भन्ने उदाहरण नै आजको सरकार भएको अनुभव जनतालाई छ ।
आज प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएर पनि अवस्था जस्ताको तस्तै भनेजस्तो छ । ती स्वतन्त्रता त टाठाबाठा, गाँठवाला र पहुँच भएकालाई मात्रै भएका छन् । लोकतन्त्र–गणतन्त्र शब्द त शक्तिशालीका हतियार भएका छन् । उनीहरुका अगाडि कानुन, नियम समेत पाखा लाग्छन्, अनि पाखुरेहरुकै तानाशाही चल्छ । प्रजातन्त्रमा जनताले अनुभव गर्न पाउनुपर्ने मुख्य कुरा सुरक्षा हो । तर आज त्यही सुरक्षित हुँदैन भने अरु के आशा गर्न सकिन्छ । यथार्थमा आजको राजनीति नै दिशाहीन भएको छ । आजको चुनाव जित्न अधिकांश ठेकेदार र व्यापारी मात्र समर्थ छन् । त्यस्ता प्रतिनिधिबाट जनकल्याणको आश गर्नु भनेको भाले रुखबाट फलको आशा राख्नु जस्तै हो ।
यो सानो देशमा मन्त्रीका जन्ती छन् । संघ र प्रदेशकै मन्त्रीको लस्कर लामो छ । त्यसपछि पालिकाहरुमा भुरे टाकुरे रजौटाहरुको ठूलो भीड छ । तैपनि जताततै गुनासै गुनासा सुनिन्छन् । सबैभन्दा बढी गुनासा त प्रधानमन्त्रीकै सुनिन्छ । जनताले गुनासा गर्न नपाउन भनेर उहाँले छेके हाल्न खोज्नुभएको त होइन ? नत्र उहाँलाई के नपुग्दो भएर गुनासा सुनाउनु हुन्छ ? राम्रा काम भए त गुनासा नहुनुपर्ने ! जनचाहना अनुसार काम नभएर जनताले गुनासा गर्नु त स्वाभाविकै हो । तर, प्रधानमन्त्री नै गुनासो गर्ने भएपछि त सोच्नैप¥यो– अब जनताले उहाँका लागि के गरिदिनु प¥यो ? अधिकार जति उहाँकै मुठीमा छ । राष्ट्रपति बनाउने सामथ्र्य समेत उहाँमै छ भने अब के पुगेन ? जनताका लागि यो बुझिनसक्नु पहेली भएको छ ।
जनताले चाहेजस्तो नभए पनि प्रधानमन्त्री र उहाँको सरकार एवं पार्टीले चाहेजस्तो त भएकै छ नि । सरकारमा भएकाहरुका चारित्रिक दुर्बलताका कारण जनताले चाहे अनुसार काम हुन नसकेको यथार्थलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न, कुन्नि त्यो वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर अघि बढेमा उहाँकै उचाई थपिने थियो । तर भजनमण्डलीको दह्रो पर्खालबाट बाहिर निस्केर गृहदृष्टि लगाउन पो उहाँलाई गाह्रो होला । उहाँले त्यो आँट गर्नसके जनता कसरी लुटिएका छन् र देश कसरी खँगारिदैछ भन्ने दृश्य छर्लङ्ग हुने थियो ।
जनताले चाहेको अहिले एउटै कुरा पूरा गरिदिनोस् प्रधानमन्त्री जी ! त्यो हो केन्द्रदेखि गाउँतहसम्म सरकार चलाइरहेकाहरुको चारित्रिक दृर्बलता र भ्रष्ट प्रवृत्तिको उपचार । जनताका लागि अहिले त्यत्ति भए पनि ठूलो उपकार हुनेछ । जनता अहिले प्रधानमन्त्रीजीको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छन् ।
सत्ता र पैसाले ल्याएको आजको विचलन - महेश्वर शर्मा (02.12.2020)
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हिम्मत भए !- तारा सुवेदी (02.12.2020)